အမောပြေလေး - Page 2
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:04 am
မ။....... ။ မောင် ရူးနေလား? လူတွေကြည့်နေတယ်လေ.. ရှက်စရာကြီး
မောင်။..။ ကြည့်ကြည့်ပေါ့ မရယ်။ မောင်က ချစ်တာကို
"မ ဝလာလည်း ချစ်မှာပဲ။ ဝဝကစ်ကစ် မ ခန္ဓာကို ပွေ့ခေါ်မယ်။အသက်အရွယ်ကြီး အိုမင်းသွားတဲ့အထိ မကို အမြဲချစ်မယ်။ မကို အမြဲဖက်မယ်" ဟုသစ္စာဆိုသည်။
လင်မယားနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ပြီးနောက် ရှေ့နေဆီသွားပြီး ကွာရှင်းဖို့ ပြင်ကြတယ်။ပိုင်ဆိုင်သမျှ ပစ္စည်းဥစ္စာကို တစ်ယောက်တစ်ဝက်ဆီ ခွဲဝေကြတော့ မိန်းမဖြစ်သူကမကျေမနပ်နဲ့ "ကျွန်မစုထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေ တစ်သောင်းကိုလည်းတစ်ဝက်ခွဲရမှာလား" လို့ မေးတယ်။ ရှေ့နေ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်။မိန်းမကဆက်ပြီး "ဒါဆို ဒီကလေးသုံးယောက်ကို ဘယ်လိုခွဲမလဲ"လို့ မေးလိုက်တယ်။ရှေ့နေခေါင်းကုတ်ပြီး စဉ်းစားတယ်။ အကြာကြီးစဉ်းစားလဲ သင့်တော်တဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ရှေ့နေက "ခင်ဗျားတို့ အိမ်ပြန်ပါ။ ကလေး၎ယောက်ရမှပြန်လာခဲ့ပါ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ ကွာရှင်းဖို ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်" လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဆေးခန်းမှာ လူနာတွေက ဆရာဝန်ပြဖို့ တန်းစီနေကြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပြပြီးသား လူနာတယောက်ကိုတွေ့လို့ သူနာပြု ဆရာမလေးက ...
''ရှင် အစောက တခါပြပြီးသား မဟုတ်လား''
''သောက်ဆေးလား၊ လိမ်းဆေးလား၊ အကုန်စစ်ပြီးပေးလိုက်တာပဲ၊ ရှင်ယူသွားပါတယ်''
''ကျွန်တော်မေ့ကျန်ခဲ့တာ ရောဂါပါ။ တမျိုးပြဖို့ လိုသေးလို့''
လူတစ်ယောက်သည် အရက်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ရာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မုးပြီးမှောက်နေသည့် လူတစ်ယောက်ကို ခလုတ်တိုက်မိသည်။
”ဘာအရက်သောက်မလဲ ဆရာ” ဟု စားပွဲထိုးကမေးသည်။
ဆိုင်ထဲဝင်လာသူက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမူးပြီးမှောက်နေသည့်လူကို လက်ညှိးထိုးပြ၍…
အမူးသမားနှစ်ယောက် ဘားဆိုင်မှာ ဆုံကြ၏
”ဟေ့…ဆမ်မီ၊ ဒီနေ့…ဘာနေ့လဲကွ” ဟုတစ်ယောက်ကမေးသည်။
”ငါမသိဘူး” ဟု ဆမ်မီကပြန်ဖြေသည်။
”ဟေ့ကောင် မင်းအိပ်ကပ်ထဲက သတင်းစာကို ထုတ်ကြည့်လေကွာ”
”ထူးမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ အဲဒါ မနေ့က သတင်းစာကြီးကွ” ဟု ဆမ်မီက ပြန်ဖြေသည်။
အိမ်ထောင်မကျခြင်းဟာ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါတော့ မဟုတ်ဘူး။
အစဉ်သဖြင့် ကြာရှည်တည်တံ့နေတာဟာ ချစ်မေတ္တာ မမည်ဘူး၊
လူယုတ်မာတွေကတော့ လူပျိုကြီးပဲ လုပ်ကြတယ်။
ယောကျာ်းတွေဟာ ငါးစိမ်းမြင် ငါးကင် ပစ်တတ်တဲ့ အမျိုးတဲ့…၊
အဲဒါ မှားတယ်…ငါးစိမ်းရော ငါးကင်ပါ ယူမယ့် အမျိုး။
ထိုင်ပြီးပျင်းနေမယ့် အစား အိပ်ပစ်လိုက်ပါ။
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စီမံဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာ ကြွက်တွေနဲ့ လူတွေဟာ နင်လားငါလားပဲ။
လူမိုက်မျက်နှာကို မကြည့်ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ သင့်ကြည့်မှန်ုကို ရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတော့…။
အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေတွေတောင် တစ်ယောက် အသုဘ တစ်ယောက် လိုက်ပို့နိုင်ကြလို့လား။
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:06 am
တစ်ခါတုန်းက ….ထန်းလျှက်နဲ့ ပဲကြီးလှော်တို့ ရည်းစားဖြစ်ကြသတဲ့…….
တစ်နေ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်က ရေကန်ဘေးမှာ ချိန်းတွေ့ကြတယ်…
ဟိုကန်လယ်က ကြာပန်းကို ခူးပေးပါနော်
အေးပါကွာ ငါမင်းကို ချစ်လွန်းလို့ ခူးပေးပါမယ်
ကန်လယ်ကိုရောက်လို့ ကြာပန်းခူးဖို့ လက်လှမ်းကာရှိသေး ပလုတ်ဆိုပြီး အရည်ပျော်သွားပါလေရော
ပဲကြီးလှော်ကလည်း ဒါကိုမြင်ပြီး အားရပါးရ ရယ်ပါလေရော…
သူကလည်း ရယ်ရင်းရယ်ရင်းနဲ့ အရယ်လွန်ပြီး နှစ်ခြမ်းပြဲရော……..
တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ဒေဝေါဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိဘဲ အရမ်းကြောက်ကြသတဲ့ …
ညနေဆိုရင် ရွာကြီးတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ပြီး ညိမ်သက်နေတာဘဲတဲ့…….
ဒါနဲ့ တစ်နေ့မှာ နွားသူခိုးတစ်ယောက် ရောက်လာဘာလေရော…
ဒီသူခိုးကလည်း ခပ်ကြောက်ကြောက်ရယ်….သူကသွားခိုးမယ့်ညက ဒီလိုစဉ်းစားသတဲ့..
ဒီလိုအကြံတူတစ်ယောက်ရှိတယ် ဒါပေမယ့် သူက ကျားလေ..
ကျားကလည်းဒေဝေါ ဆိုတာဘာမှန်းမသိဘူး တဲ့ သူကလည်းဒေဝေါကိုကြောက်တာဘဲတဲ့
ဒါနဲ့ သူခိုးက ကျားကို နွားထင်ပြီးတက်အခွ
အမယ်လေး ဒေဝေါဗျို့ ဒေဝေါ ဒေဝေါ
ဒါနဲ့သူခိုးလည်း ကျားမှန်းသိသွားပြီး ကြောက်ကြာက်လန့်လန့်နဲ့ တောစပ်ကသစ်ပင်ကိုလှမ်းဆွဲပြီး သစ်ခေါင်းထဲ ၀င်ပုန်းနေခဲ့တယ်
မျောက်……….အိုအဆွေကျား ဘာလို့မောကြီးပန်းကြီး ပြေးနေရတာလဲ
ကျား………….မပြော ပြောချင်ပါဘူး အဆွေရာ ကျုပ်ကျောပေါ်ကို ဒေဝေါတတ်စီးလိုဗျ
ဟိုရောက်တော့ ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီး သစ်ခေါင်းထဲ စမ်းကြည့်ပါလေရော
ပထမတော့ လက်နဲ့စမ်းကြည်တယ်..သူခိုးကလည်းဘာမှန်းမသိဘူးဆိုပြီး နောက်ကိုဆုတ်နေသတဲ့
မျောက်လည်း လက်နဲ့မမှီတော့ ခြေထောက်နဲ့စမ်းပါလေရော
မရတော့ အမြီးနဲစမ်းပါလေရော …..
အမြီးကို ဆွဲပြီးသူ့မှာပါလာတဲ့တုတ်နဲ့ ဖင်ဆောင့်ထိုးလိုက်ရော…
''ဆရာ ယောက်ျားတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ရောဂါ မိန်းမတွေမှာလည်း ဖြစ်တာပဲလားဟင်''
''မေးပါရစေဦး၊ ယောက်ျားမှာဖြစ်တဲ့ရောဂါက အိမ်ဖော်ရော ဖြစ်တတ်သလားဟင်''
လူချောလေးတစ်ယောက်မှာ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစရည်းစား အသစ်စက်စက်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့အသည်းလေး မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်အောင်…ဘာလက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းမလဲလို့ အသည်းအသန်စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ သူ့အချစ်လည်း ပေါ်လွင်ရမယ် သူမအတွက်လည်း အသုံးဝင်ရမယ်။
အမှတ်တရနဲ့ ဂန္ဓ၀င်လည်း မြောက်ရမယ်ပေါ့။ ဈေးကြီးတာလည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ နောက်ဆုံးအကောင်းစား လက်အိတ်ဖြူဖြူလေးတစ်စုံ ၀ယ်ဖို့ ကြည်နူးစွာ ဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်ရောက်တော့ သူကလက်အိတ်အဖြူလေးတစ်စုံ ၀ယ်တယ်။ ချစ်သူ့ညီမလေးက အောက်ခံဘောင်းဘီ (ပင်တီ) တစ်ထည်ဝယ်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ထုပ်ပိုးပေးတဲ့ အရောင်းစာရေးမ အမှားကြောင့် ချစ်သူ့ညီမက လက်အိတ်ရသွားတယ်။
ကိုယ်ဘာလို့ ဒီလက်ဆောင်ကို ရွေးချယ်ရသလဲဆိုတော့ မင်းနဲ့ကိုယ် ညနေခင်းတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့ အခါ မင်းဝတ်လေ့ဝတ်ထ မရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ် သတိပြုမိလို့ပဲ။
ကိုယ်က နှိပ်ကြယ်သီးပါတာ ၀ယ်ဦးမလို့ပဲ။ မင့်ညီမက ချွတ်လို့စွတ်လို့ လွယ်အောင် အဲ့ဒါကိုပဲ ၀ယ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ဟုတ်တယ်…သူစွပ်ပြ ချွတ်ပြတယ်…လှလိုက်တာလေ။ စွတ်ရချွတ်ရတာလည်း လွယ်တယ်။
အရောင်းစာရေးမကတောင် သူမလည်းဒါပဲ ၀တ်ကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင် ၀တ်ပြချွတ်ပြသေးတယ်။ အတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ သူမက အပေအစွန်းလည်း ရေဆေးရုံနဲ့ ပြောင်ကြောင်း အာမခံတယ်လေ။ ဒီတစ်ခါ ကိုယ်လာရင် မင်းဝတ်ထားတာ မြင်ချင်တယ်။ တွေ့ရင်တော့လား အထပ်ထပ်အခါခါ နမ်းပစ်မိမှာပဲ။ သောကြာနေ့မှာ ကိုယ်နမ်းဖို့ ဆက်ဆက်ဝတ်ထားနော်…နော်…
P.S။ ။နောက်ဆုံးပေါ်ကတော့ နှုတ်ခမ်းပန်းနားမှာ အမွှေးတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင် တပ်ထားတယ်။ သည်းလေး ယားမှာ စိုးလို့ ဈေးလည်းကြီးလို့။
ထောင်ကျနေသော အကျဉ်းသားထံသို့ သူ၏ ဇနီးဆီမှ စာတစ်စောင် ရောက်လာသည်။ ”မောင်ရေ…ကျွန်မအိမ်နောက်က ပိုနေတဲ့မြေမှာ ဆလပ်ပင်တွေ စိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်၊ အပိုဝင်ငွေ ရတာပေါ့၊ အဲဒါ ဘယ်အချိန် စိုက်ရင် အကောင်းဆုံးလဲ! သိချင်တယ်” တဲ့။
LA ထောင်ဝါဒါတွေ စာဖောက်ဖတ်တတ်မှန်း သိနေသော အကျဉ်းသားက သူ့မိန်းမထံစာပြန်လိုက်သည်။
”မိန်းမရေ…မင်းဘာလုပ်လုပ် အဲဒီ အိမ်နောက်က မြေကိုတော့ လုံးဝသွားမထိနဲ့၊ ငါ အဲ့ဒီမှာ ပိုက်ဆံတွေ မြှုပ်ထားတယ်”တဲ့။
တစ်ပတ်လောက်ကြာသောအခါ မိန်းမထံမှ စာတစ်စောင် ရပြန်သည်။
”မောင်ရေ…မယုံနိုင်စရာပဲ၊ ကျွန်မမရှိတုန်း လူတစ်ယောက် ပေါက်တူးနဲ့ ၀င်လာပြီး အိမ်နောက်က မြေအားလုံးကို တူးဆွသွားပါရောလား”တဲ့။
”မိန်းမရေ…ခုချိန်ဟာ မင်းစိုက်ချင်နေတဲ့ ဆလပ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ”တဲ့။
နတ်ရွာမိုး၏ ဖွဲမီး ၀တ္ထုမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ရေချိန်ကိုက်နေသော ဇိုးငနဲကြီးတစ်ယောက် ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းထဲ ၀င်လာပြီး ဖြောင့်ချက်ပေးခန်း (Confession Box) ထဲ အသာဝင်ထိုင်သည်။ ဘာစကားမှ စပြောမလာ။ အထဲရှိ အာပတ်ဖြေပေးမည့် ဘုန်းတော်ကြီးက ချောင်းဟန့်၍ သူရှိကြောင်း၊ ဖြောင့်ချက်ပေး နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးသည်။
ဇိုးသမားကြီး တုံဏှိဘာဝေ ငြိမ်သက်နေဆဲ။ ဘုန်းတော်ကြီးက စကားစပြောရန် အတွင်းကနေ နံရံကို သုံးချက်ခေါက်၍ သတိပေးမှ…
”ဟေ့…စွတ်ခေါက်မနေနဲ့၊ စက္ကူမရှိ ရေမရှိနဲ့ ငါတောင် ဒုက္ခရောက်နေတာကွ”
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:07 am
ဆရာဝန်က လူနာကိုမေးတယ်။ လူနာက စိတ်ဝေဒနာခံစားရပြီး အတိက်မေ့နေတာ။
''ကဲ - ခင်ဗျား အကြောင်းကို ပြောပြစမ်းဗျာ''
''မွေးတာက စပြော၊ ဆေးရုံမှာလား၊ အိမ်မှာလား၊ ဘယ်မြို့မှာလဲ''
''အဲဒါ ခက်တာပဲ ဆရာ၊ ကျွန်တော်လည်း မွေးပြီးရော အမေက ဆုံးသွားတာ၊ ဘာမှ ပြောမသွားဘူး''
ကိုချူချာ တစ်ယောက် အခုတစ်လောအလွန်ဝလာသဖြင့် အလွန်စိတ်ညစ်နေသည်။
စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်း သတင်းစာကို ယူကြည့်ရာ
ကြော်ဋ္ဌာတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကြော်ဋ္ဌာက… သင်၏ အဆီများကျဖို့ 
ဖုန်းနံပါတ်………..သာဆက်သွယ်လိုက်ပါဟု တွေ့ ရသဖြင့် ခေါ်ဆိုကြည့်
ရာ တစ်ဖက်မှ…ဟုတ်ကဲ့ Slim Body Group
တစ်ဖက်မှ…ဟုတ်ကဲ့ မနက်ဖြန်ကစပြီး လူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်
အိမ်တံခါးခေါက်၍ သွားဖွင့်ရာ….ငယ်ရွယ်ချောမောလှပသော မိန်းမပျိုလေး
လည်ပင်းတွင် ကတ်ပြားတစ်ခုချိတ်ဆွဲထား၍ ဖတ်ကြည့်ရာ…..
မိအောင်ဖမ်း..မိရင်နမ်း…ဟုတွေ့ ရသည်။ ထိုမိန်းကလေး က ဘာမှမပြောဘဲ
ထိုမိန်းကလေးနောက်ပြေးလိုက်ရာ တစ်ပတ်မျှကြာသော်…အမှန် တစ်ကယ်ပင်
ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့်စောင့်နေ သည်ကို တွေ့ ရပြန်သည်။ ထိုမိန်းကလေး၏
ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပတ်ပြည့်၍ ပေါင်ချိန်ကြည့်ရာ တစ်ကယ်
၁၀ပေါင်ကျသွားလေသည်။ ကိုချူချာတစ်ယောက် လောဘတက်လေပြီ။ ၂ ပတ်အတွင်း
လွန်စွာ ပင်ပန်းကြောင်းနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါင်ချလျှင်လည်း
တံခါးသွားဖွင့်ရာ….တံခါးတွင်…ထောင်ထောင်မောင်း မောင်း သန်သန်မာမာ
''ခြေတွေလက်တွေ မသယ်ချင် ဖြစ်နေတာ၊ အားယုတ်နေတာ။ အဲဒါ ဆေးကောင်းကောင်းလေးလိုချင်လို့၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကို လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်''
''အိမ်နဲ့ ဆေးခန်း ဘယ်လောက်ဝေးသလဲ''
''၅ မိုင်လောက်တော့ ရှိမယ် ဆရာ''
''ဟာ – ဒါဆို အတော်လှုပ်ရှားနိုင်သေးတာပဲ၊ ခုလောက် ဘီးနင်းမှတော့ ဒါလောက်တော့ မောမှာပေါ့။ ဦးလေး အသက် ၆၄ နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်''
''ဟာ မဟုတ်တာ ခုမှ ၄၆ နှစ်ဗျ''
ခဏ ခဏ ရပ်ပြီး ရေထည့်ရတယ်။
အသက် 70 ကျော်လောက်ရှိတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲလမ်းလျှောက် ထွက်လာပါတယ်....
ရေတွင်းမှာရေးထားတာက...makeawish withapenny တဲ့...
အဘိုးရဲ့ အပြုံးတစ်ချက်လက်သွားပြီး သူ့ ဘေးကအဘွားလဲပျောက်သွားပါတယ်...
လှပချောမောတဲ့....ကောင်မလေးတစ်ယောက်...သူ့ ဘေးကိုေ၇ာက်လာပါတယ်.. .
ကျွန်တော် တို့ ဘိုးဘိ်ုးကတော့.....ပြိုင်ဘက်ပေါ်လာပြီဆိုပြီး...ဘုကြည့်နေတုန်း..
ကောင်မလေးပျောက်ပြီး....မောင်အာနိုးက...ဘိုးဘိ်ုးကို.လာတွဲပါလေရော....(man to man)
ကြောက်လန့် မှုအပေါင်း...သရဖူဆောင်းလာတဲ့ဘိုးဘိ်ုးဟာ....လျှင်မြန်စွာဘဲ...ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်..
ဟာသ video လေးတစ်ခုကို..ပြန်ရေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါ..
မောင်။......။ နင်အလှပြင်တာကို စောင့်ရင်း ရိတ်ပြီးသား ငါ့မုတ်ဆိတ်တွေ ထပ်ရှည်လာလို့ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရိတ်နေတာ။
လူတစ်ယောက်သည် ယင်ကိုးကောင်ကို ရိုက်ပြီး
"ဒီယင်ကိုးကောင်မှာ ၅ကောင်က အထီး၊ ၄ကောင်က အမကွ"
"အထီးမှန်း၊ အမမှန်း မင်းဘယ်လိုလုပ်သိသလဲ"
"၅ကောင်က အရက်ပုလင်းမှာနားနေပြီး ၄ကောင်က ကြည့်မှန်ပေါ်နားနေလို့ကွ"
- အသက်(၁၀)နှစ်ကနေ (၂၀) အတွင်းက အာဖရိကနဲ့တူတယ်…
- (စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်… ရှာဖွေစူးစမ်းစရာတွေရှိနေတယ်…)
- အသက်(၂၀)ကနေ (၃၀) အတွင်းမှာတော့ အိန္ဒိယနဲ့တူတယ်…
- (တည်ငြိမ်လာတယ်… တိုးတက်နေတယ်… အိနြေ္ဒရှိတယ်… သိမ်မွေ့တယ်… )
- အသက်(၃၀)ကနေ (၄၀) အတွင်းကတော့ အမေရိကားနဲ့တူတယ်…
- (အတတ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတယ်…)
- အသက်(၄၀)ကနေ (၅၀)အတွင်းကတော့ ဥရောပနဲ့တူတယ်…
- (နှစ်လိုဖွယ်ရာ သ်ိပ်မရှိတော့ဘူး… ဟန်ပဲရှိတော့တယ်…)
- နောက်ဆုံး အသက်(၅၀)ကျော်သွားရင်တော့ ဆိုက်ဘေးရီးယားနဲ့တူတယ်…
- (၄င်းရှိတာကို သိပေမယ့်လည်း… ဘယ်သူမှ မသွားချင်ကြဘူး…)
မိန်းကလေးများဟာ… အသက်(၂၅)နားနီးလာပြီဆိုရင်… အသက်(၂၅)ကိုဖြတ်ကျော်ပြီဆိုရင်… အပျိုကြီးလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ…မရည်ရွယ်ဘူးဖြစ်စေ… "အပျိုကြီး" လို့ ခေါ်တာကိုတော့ လုံးဝမကြိုက်ကြပါဘူး…
တစ်စုံတစ်ယောက်က ခေါ်လိုက်မိတဲ့အခါ ပြန်ပြောလေ့ရှိတဲ့စကားတွေကတော့…
- "ငါ့ အလှကမှ ရင့်ကျက်တဲ့ အလှ…" (ဆယ်ကျော်သက်များက အပျိုကြီးဟု ခေါ်သောအခါ တုံ့ပြန်ပုံ…)
- "ငါက သူ့ထက်တောင် နုပါသေးတယ်…" (သူမထက် နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်ငယ်သူများ၏ ခေါ်သံကို ကြားရသော အခါ တွေးတောပုံ…)
- "ငါက မဖြစ်သေးပါဘူး… သူတို့ကသာ အရိုးဆွေးနေကြပြီ…" (သူမ၏စီနီယာ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးများက ခေါ်သည်ကို ကြားရသောအခါ ဆင်ခြင်ပုံ…)
အသက်(၂၅)ကျော်လာပြီး လက်ဆုပ်လက်ကိုင် မရှိသေးသူများကို အပျိုကြီးလို့ ပြောမိရင်တော့…
- "သွားမပါရင်နေ… ကားပါရင် စဉ်းစားမယ်…" စသည်ဖြင့်ပေါ့…
(တစ်ချို.ကတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး… ပြုံးနေပါတယ်… တစ်ချို.ကတော့မဲ့ပြုံးပြုံးပါတယ်… တစ်ချို.ကတော့ ခါးသီးစွာ မဲ့ပါတယ်… တစ်ချို.ကတော့တည်တည်ကြီးတုံ့ပြန်ပါတယ်…)
မိန်းကလေးတွေက သူမတို့ရဲ့ နုပျိုနေတဲ့ အချိန်တွေကိုအလွန်နှမြောကြပါတယ်… အမှန်တရားကိုလည်း လက်မခံနိုင်ကြတဲ့အတွက်ခေတ်ပေါ်Cosmetics များရဲ့ အကူအညီရဲ့ နုပျိုခြင်းကို အချိန်ဆွဲ… ဇရာကိုကျားကန်ထားတတ်ကြပါတယ်… "ဣတ္ထိရူပံ ဓနံ"… ဆိုတော့လည်း… ပြောရခက်သားပဲလေ…
-သူမတို့ရဲ့ ရည်းစားကို အရမ်းချစ်မြတ်နိုးကြပါတယ်…
(လသားကလေးလက်ထဲကို အရုပ်ကလေးထည့်ထားပြီး ပြန်ယူတဲ့အခါ လုံးဝလွှတ်မပေးတော့ပဲ အတင်းအကျပ်ကိုင်ထား သလိုမျိုးပါ…)
-မိန်းကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ သူမရဲ့ရည်းစား စကားပြောတာကိုလည်း မနှစ်လိုပါဘူး…
(ကောင်မလေးတွေက ငယ်ပေမယ့် မခေဘူး…ပဲကလည်းများ… အသံကလည်း ခရာတာတာ ညုတုတုနဲ့လို့ တွေးနေတတ်ပါတယ်…)
-တစ်ခြားလူကို ပြောတဲ့ အသံနဲ့ ရည်းစားကို ပြောတဲ့ အသံ နူးညံ့မှုနဲ့ အီစီကလီဖြစ်မှု အဆတစ်ရာလောက်ကွာ ခြားပါတယ်…
-သူမတို့ရဲ့ ရည်းစားကို အခြားလူများက အကူအညီတောင်းမိရင် အင်တင်တင်နဲ့ သဘောမတူသလို လုပ်တတ်ပါသေးတယ်…
အထက်ပါ အချက်တွေက အပျိုကြီးတွေမှာသာ မဟုတ်ပါဘူး… မိန်းကလေး တော်တော်များများမှာ ရှိတတ်တဲ့ အချက်တွေပါပဲ…
မိတ်ဆွေ… အပျိုကြီးနဲ့များ ကြိုက်မိလျှင်တော့ သင်သတိထားလော့…
ကျွန်တော် ရဲ. အားထားရတဲ. အတွင်းရေးမှူး ၀န်ထမ်းမ လေး ကို ပြီးခဲ.တဲ.အပတ်က အလုပ်ထုတ် ပစ်ခဲ.ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုဗျ။ ပြီးခဲ.တဲ. အပတ်ကကျွန်တော်. အသက် ၄၀ ပြည်. မွေးနေ.ပေါ.ဗျာ။ ဒီတော. ထိုနေ. မနက်စောစောထ ပြီးအိမ်အောက်ဆင်း ရင် မိန်းမ က "Happy Birthday"လို.ပြောတာ ကြည်နူးမယ် ပြီးတော. အနည်းဆုံးလက်ဆောင်တခုခု ကို လက်ခံမယ်ဆိုတဲ. ခံစားချက်နဲ.ပေါ.ဗျာ။ တကယ်တမ်းကျတော. သူမ က ကျွန်တော. ကို ဂရုတောင်မစိုက်ပဲ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အလုပ်ရူပ် နေပါတယ်။ အင်း ငါ.မှာ ကလေးတွေရှိသေးတာပဲ သူတို.ကို ဒီအသက်အရွယ် ရှိ ကျွေးမွေး လာမှ တော. ငါ.ကို "ံHappy Birthday Daddy" တော. ပြောကောင်းပါတယ်။ ဟာ… ကလေးတွေလဲ ကျွန်တော. ကို ဂရုမစိုက်ပဲ မနက်စာ ပဲ ငုံ.စား နေခဲ.တယ်လေ။
ဒီလိုနဲ.စားသောက်ဆိုင်ရဲ. သီးသန်. အခန်းထဲမှာ ၂ယောက်တည်း စကားတွေ တ၀ပြီးပြောရင်းအရက်ကလေး သောက်ရင်း စားသောက်ခဲ.ကျပါတယ်။ အဲ.နောက်တော. သူမကိုအိမ်ပြန်ပို.ပေးမယ် လို. ပြောလိုက်တော.သူမက "ဆ၇ာ သမီး အခန်းကို လိုက်ခဲ.ပါလား။ ဒီနားလေးမှာပဲ။" ဆိုတော. လိုက်သွားခဲ.တယ်။ သူမ ထပ်တောင်းဆိုပြန်ပါတယ်။ "ဆရာ အခန်းထဲထိ လိုက်ခဲ.ပါနော်.. နော်… သမီးတစ်ယောက်တည်း နေတာပါ"။ ကဲ ဒီတော.လဲ အခန်းထဲသို. ထိရောက်သွားခဲ.တယ်။
ကျွန်တော်လည်း အခန်း ထဲ ရောက်ကော သူမ က "ဆရာ သမီး ရေ၀င်ချိုးလိုက်ဦးမယ် ခဏလေးစောင်.နော် "ဆိုပြီး အခန်းလေး တခုထဲ ၀င်သွားတယ်။ တအောင်.နေတော. သူမ က မွေးနေ.ကိတ်အကြီးကြီး ကို ကိုင်လာပြီး ကျွန်တော. မိန်းမနဲ. ကလေး တွေ က နောက်ကနေထွက်လာကျပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆီကို လူတစ်ယောက် ဆေးခန်းလာပြပါတယ်။
လူနာ။ ဆရာ ကျွန်တော်အားလပ်ရက်တစ်လရပါတယ်။ အဲဒါ ဒီတစ်လအတွင်း ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းကောင်းကုစားလို့ ရပါ့မလား သိချင်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျား မျက်နှာချင်း ဆိုင်က ဆေးခန်းကို သွားပြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
လူနာ။ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ။ ကျွန်တော် ဆရာ့ ဆီကိုပဲ လာတာပါ။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် က တိရစ္ဆာန် ဆေးကု ဆရာဝန်ပါ။ လူတွေကို ကျွန်တော် မကု ပါဘူး ခင်ဗျ။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျား က ကျွန်တော့် လိုစကားပြောတယ်၊ ကျွန်တော့် လိုတွေးတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားလည်း လူပဲ လို့ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
လူနာ။ ကျွန်တော် ကိုယ့် ကိုကိုယ် လူဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပါတယ် ဆရာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ရှင်းပြတာကို ဆရာ နားထောင်ပါဦး။
မနက် ရောက်ရင် မြင်းတစ်ကောင်လို ပဲ ထရပါတယ်။
အလုပ် ကို တော့ သမင် တစ်ကောင်လို ပြေးသွား ရပါတယ်။
အလုပ် ထဲမှာ တော့ တစ်နေကုန် မြည်း တစ်ကောင်လို လုပ် ရပါတယ်။
ပြီးတော့ ဆယ့်တစ်လ လုံးလုံး နားရက် မရှိပဲ နွားတစ်ကောင်လို ရုန်းရပါတယ်။
သူဋ္ဌေး ရှေ့မှာတော့ အမြဲတမ်း အမြှီးလေးကုပ်ထားရပါတယ်။
အားချိန်လေးများ နည်းနည်း ရရင်တော့ မျောက် တစ်ကောင်လို ပဲ သားတွေ သမီးတွေနဲ့ ကစားရပါသေးတယ်။
မိန်းမ ရှေ့ရောက်ရင်တော့ ယုန်တစ်ကောင်လိုပေါ့ဗျာ။
အဲဒီမှာ ဆရာဝန်က ဖြတ်မေးပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ ခင်ဗျား အင်ဂျင်နီယာထင်တယ်။
လူနာ။ ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ဒါများ ဗျာ ဒါတွေရှင်းပြနေရသေးတယ်။ အစ ကတည်းက ကျွန်တော် အင်ဂျင်နီယာပါလို့ပြောလိုက်ရင် ပြီးရော။ လာလာ ခင်ဗျား ကို ကျွန်တော် ကလွဲ ရင် ဘယ်သူမှကုပေးလို့ ရမှာ မဟုတ်ဖူး။
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:08 am
အိမ်ထောင်ရှိသူ အမျိုးသားတစ်ယောက် က သူ.ရဲ. small လေး ဆီကို အလည်သွားပါတယ်။ သူ.ရဲ. small လေးကလဲ သူ.ကိုတွေ.တိုင်း
Small လေး - "ရှင်.ရဲ.ပသိုင်းမွေး တွေ ကို ရိတ်လိုက်ပါလား ရှင်။ ဒါမှ ရှင်ရဲ. အင်မတန်ခန်.ညားတဲ. ရုပ်ကို ကျွန်မ ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားလို.ရမှာ"
အမျိုးသား - "ငါ.အိမ်ကအဖွားကြီးက အဲ.ဒီ အမွေးကို ကြိုက်တယ်ဟ။ ငါ.သာ အဲ.ဒီ ပသိုင်းမွေး ကိုရိတ်လိုက် ရင် ငါကို သတ်မှာ။ ဒါဆို ချစ်လေးနဲ. ဝေးပြီ။"
Small လေး ရဲ. အချွဲကောင်းမူကြောင်. ထိုအမျိုးသားလဲ သူ.ရဲ. ပသိုင်းမွေး ကို ရိတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီည မှာ ပဲ သူက ကျောပေးပြီး အိပ်နေသော သူ.မယားကြီး ခုတင်ပေါ်ကိုတိတ်တိတ်လေး တက်ပြီး လဲလိုက်စဉ်။ မယားကြီး က ရုတ်တရက် နိုးလာပြီးလှည်.မကြည်.ပဲ သူ. ရဲ. မျက်နှာ ကို ပွတ်သတ်အာရုံခံလိုက်ခါ "အမလေး ရှင်မပြန်သေးဘူးလား။ ခဏ နေရင် အိမ်က နွားကြီး ပြန်လာတော.မှာနော်"
ပွဲတော်ည မတိုင်ခင်တစ်ညမှာ လူတစ်ယောက်က အရက်အိုးတစ်လုံးကို အိမ်ရှေ့မှာ ချထားခဲ့တယ်။ ဒုတိယမနက်မှာ အိုးထဲကအရက်တွေ ၄ပုံ၁ပုံ လျှော့နေတာကို သူတွေ့တော့ "အရက်မခိုးရ" ဆိုတဲ့ စာတန်းကို အိုးပေါ်မှာ ရေးကပ်ထားလိုက်တယ်။ တတိယမနက်မှာ အရက်တွေ လျှော့နေတာကို သူတွေ့လိုက်ပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ "အရက်ခိုးသူ အပြစ်ယူမည်" ဆိုပြီး ရေးကပ်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရက်က အခိုးခံရမြဲ အခိုးခံနေရတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို မိတ်ဆွေတစ်ဦးက သိတော့ "ခင်ဗျား တုံးလိုက်တာဗျာ.. အိုးပေါ်မှာ သေးအိုးဆိုပြီး ရေးကပ်ထားရင် ဘယ်သူမှ ခိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူး" လို့ အကြံပေးလိုက်တယ်။ အကြံအတိုင်း အရက်အိုးပေါ်မှာ သေးအိုးလို့ သူ ရေးကပ်ထားလိုက်တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ အရက်အိုးကြီး ပြည့်နေတာကို သူတွေ့တော့ ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး "အရက်မခိုးရ" လို့ ရေးကပ်လိုက်ပြန်တယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ လူတွေအားလုံး ဒေါသထွက်ကြတော့တယ်။
Credit to : nineninesanay.blogspot.com
ယောကျာ်းဖြစ်သူ အလုပ်က ပြန်လာသည်။ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ ညိုးငယ်သော မျက်နှာကို ကြည့်ကာ အိမ်တွင် တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဟု သိလိုက်သည်..
ယောကျာ်း ။ ။"မကောင်းတဲ့ သတင်းနဲ့ ငါ့ကို မကြိုနဲ့ကွာ၊ ရုံးမှာ စိတ်ညစ်ရတာနဲ့ကိုပဲ ငါ့မှာ လုံလောက်နေပြီ"
မိန်းမ။ ။ကောင်းပြီ ရှင်ကို သတင်းကောင်းနဲ့ အရင်ပြောမယ်၊ ကျွန်မတို့ဆီမှာ ကလေးငါးယောက် ရှိတယ်နော်။
အဲ - လေးယောက်ဟာ ဒီနေ့မှာ ခြေထောက်ရော လက်ရော မကျိုးဘူး"
ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် မီးတောက်မီးလျှံတွေကိုပဲ မြင်ရတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး
ပူလောင်အိုက်စပ်နေတယ် ၊ အသက်ရှုလို့လည်း မ၀ဘူး.. ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရတယ်
"အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ၊ ခင်ဗျား ဘာကို ကြောက်စရာလိုလဲ အခုခင်ဗျားဟာ လူဖြစ်တယ် စပါးစေ့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျား
သိနေတာပဲ""ဒါပေမဲ့ ကြက်တွေ အဲဒါကို မသိဘူးခင်ဗျ"
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:09 am
တခါတုန်းကပညာရေးဌာနက စစ်ဆေးရေးအရာရှိတယောက်ဟာ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကစာသင်ကျောင်းတကျောင်းကို စစ်ဆေးရင်း ကျောင်းသားလေး တယောက်ို မေးလိုက်ပါတယ်။
"နတ်ရှင်နောင်ကို ဘယ်သူ သတ်သလဲကွ"
ကျောင်းသားလေးဟာ တော်တော်လေး ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်။ အသံတွေတုန်ပြီး… ကျ ကျနော် မသတ်ဘူး" တဲ့။
ပညာရေးအရာရှိဟာကလေးရဲ့ ပညာရေးအခြေအနေအပေါ် အတော်လေး မကျေမနပ်ဖြစ်သွားပြီး အတန်းပိုင်ဆရာမကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အတန်းပိုင် ဆရာမလည်း ကမန်းကတမ်းနဲ့ကျောင်းသားလေးအတွက် စိတ်ပူပြီး ကျောင်းသားလေးဖက်က ကာကွယ်ပြီး ပြောလိုက်တာက-
"ဒီကျောင်းသားလေးဟာ အတန်းထဲမှာသိပ်အေးပါတယ်ဆရာ။ ကျောင်းသားတွေ အချင်းချင်းတောင် ရန်ဖြစ်တာ မရှိပါဘူး။သူသတ်တာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ရှင်" တဲ့။
စစ်ဆေးရေးအရာရှိလည်း ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ပဲ မျက်စိမျက်နှာပျက်ပြီး ပြန်သွားပါတယ်။နောက်တော့ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆီ စာသင်လိုက်သတဲ့။ဒီလိုနဲ့ မကြာခင် ၀န်ကြီးဌာနက အခုလို စာပြန်လာပါတော့တယ်။
"နတ်ရှင်နောင် သေတာလည်းကြာပါပြီ။ နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်မနေပါနဲ့တော့" တဲ့ဗျာ။စာကြွင်း။။ ကျနော် E-mail ထဲကိုရောက်လာတဲ့ မေးလ်လေးထဲက ဟာသလေးတွေပါ..မူရင်းရေးသားသူကို မသိပါဘူး။ ဒီဟာသလေးတွေဟာ ကျနော်တို့ အတွက်အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှ အနည်းအကျဉ်းတော့ ပြုံးရယ်နိုင်မယ်ထင်လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ..
"မောင်ပီတာ၊မင်းဟာ လွန်လွန်းပြီကွယ့်၊ မနေ့က လေ့ကျင့်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ်မပါဘဲကျောင်းကိုလာတယ်၊ ဒီနေ့ ကျောင်းသုံးစာလုပ် ပါမလာပြန်ဘူး၊ လက်နက်မပါတဲ့စစ်သားကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ သိလား"
ဆေးခန်းထဲမှာ ဆရာဝန်က လူနာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးကုသပြီးတော့။ ရပြီ – ရှေ့စားပွဲသွားလိုက်ပါ။ သူနာပြုဆရာမက ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ လူနာက ရှေ့စားပွဲမှာ သွားရပ်တော့ ဆရာမက ဆေးပေးပြီးတော့ –
''ငါးထောင့်ရှစ်ရာ ကျပါတယ်။ မသက်သာရင် ပြန်လာပါ။ ဆရာက ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဆေးပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်''
''ဒါဆို မသေမချာ သောက်ရမယ့် ဒီဆေး တော်ပြီလေ။ ပြောင်းပေးမယ့်ဆေးကိုပဲ တခါတည်း ပေးလိုက်ပါလား''
''ဆရာ- ဆရာပေးလိုက်တဲ့ ဆေးကို မှားတိုက်မိရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆရာ။ ကျွန်တော့်အတွက်ပေးတဲ့ဆေးကို ကျွန်တော့်မိန်းမတိုက်လိုက်မိလို၊ ကျွန်တော် စိုးရိမ်နေပြီ ဆရာ''
''သူ ဘာဖြစ်နေပြီလဲ၊ ထူးခြားမှု ရှိသလား''
''ဘာမှ မထူးခြားဘူးဆရာ၊ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်ပါပဲ''
''အဲဒါကြောင့် စိုးရိမ်တာ ဆရာ၊ မှားတိုက်တာသိသွားရင် ကျွန်တော် မလွယ်ဘူး''
ပား၅၀ ဟာဘဲ ယူမှာပေါ့
၀ယ်သူ ။ ။ "ဟို အဆာသွတ်မုန့် ၂ခု ကဘယ်လောက်လဲမသိဘူး ရှင့်"
ရောင်းသူ ။ ။ " ၁ဒေါ်လာနဲ့ ပြား ၅၀ ပါ "
၀ယ်သူ ။ ။ " ဒီ၁ခုထဲဆိုရင်ရော"
ရောင်းသူ ။ ။ " ၁ဒေါ်လာပါ"
၀ယ်သူ ။ ။ "ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်မ နောက် တစ်ခုဝယ်ချင်တယ်ရှင့် "
တိုက် ၂လွှာမှာနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အခန့် မသင့်ဘဲ ခြေထောက်ကျိုးသွားရာ ဆရာဝန် က သူမ၏ ခြေထောက်အား ကျောက်ပတ်တီး စီးပေးပြီးနောက် သူမအား လှေကားများ မတက်ရန် ပြောကြားပြီး
၇ လအကြာ မှာ ကျောက်ပတ်တီးကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်သော အခါ
အမျိုးသမီး ။ ။ "ဒါဆို ကျွန်မ လှေကားတက်လို့ ရပြီပေါ့"
ဆရာဝန် ။ ။ "ရပါပြီ ခင်ဗျာ"
အမျိုးသမီး ။ ။ "အမလေးးး တော်ပါသေးရဲ့ကျွန်မတို့ တိုက်က ဓာတ်လှေကားမရှိတော့ ကျွန်မ ရေပိုက်ကြီးကို ဖတ်တက်ရတာ မောလှပြီ"
ဆရာဝန် ။ ။
လူတစ်ယောက်က အသားအရမ်းမည်းလို့ လူတွေက သူ့ကို မြို့ကနေ မောင်းထုတ်လိုက်သတယ့်။
ဒါနဲ့ သူက လူတွေကိုစိတ်နာပြီ: သဲသောင်ပြင်ဘက်ထွက်သွားတယ်တဲ့။
အဲ့မှာ သူက ရေအရမ်းဆာနေတာပေါ့လေ အဲ့ဒါနဲ့ သူက သေခါနီးအချိန်ကိုရောက်လာရော…
အဲ့မှ သဲသောင်စောင့်နတ်က သနား ပြီး ထွက်လာတာပေါ့..
သဲသောင်စောင့်နတ်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆု၃ ခုတောင်းခိုင်းသတယ့် ။ မသေခင်ပေါ့။
အဲ့မှာ သူတောင်းတဲ့ဆု တွေ ကတော့
(၁ ) အသားမည်းလို့လူတွေက မောင်းထုတ်လိုက် တယ်..ဒါကြောင့်
(၂ ) ဒီဘ၀မှာ ရေဆာလို့သေရတော့မယ် ..ဒါကြောင့်
နောက်ဘ၀ကျရင် ရေတွေအရမ်းပေါ များတယ့်နေရာမှာ ဖြစ်ရပါစေ….
(၃) နောက် ဆုံးတစ်ခု အနေနဲု့ကတော့ ကောင်မလေးတွေကိုမြင်ရင် ဘောင်းဘီမပါပဲမြင်ရပါစေ
အဲ့ဒီမှာ နတ်ကြီးကလည်း ပြည့် စေပေါ့ ….
အဲ့ဒီမှာ အဲ့ဒီလူလည်းသေရော ဆုတောင်းကချက်ချင်းပြည့်ပြီ ဒန် တန် တန်…………
မိန်းမအိမ်သာထဲ က “ အိမ်သာကြွေခွက် ” ကြီးဖြစ်သွားရောတယ့် ……
ဆုတောင်း မမှားကြနဲ့ကို့လူတို့ ……….. (^_^)
''ဆရာ ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရဲ့ မှတ်Óဏ်ကို မှန်းဆပေးပါဦး ဆရာ၊ နောက်ထပ် ဘာသာစကားတခုသင်ရင် မှတ်မိနိုင်ပါဦးမလား''
''ကြိုးစားရင်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ သင်ချင်တာလဲ၊ နိုင်ငံခြားထွက်မလို့လား''
''မဟုတ်ပါဘူးဆရာ၊ မိန်းမက ကိုးရီးယားဘာသာစကားသင်နေတာ၊ လေ့ကျင့်ဖို့ အဖော်မရှိလို့ဆိုလို့''
လင်မယားနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ပြီးမကြာဘူး ယောက်ျားဖြစ်သူက အိမ်မွေးကြောင်နဲ့
ဆော့ကစားနေခဲ့တယ်။ ဒါကို မိန်းမကမြင်တော့ "နင်ဘာလို့ အဲဒီဝက်နဲ့ ကစားနေတာလဲ"
အငေါက်ခံရတဲ့ ယောက်ျားက ကြောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီး "ဒါဝက်မဟုတ်ဘူး.. ကြောင်ကွ..
ကြောင်" လို့ ပြန်အော်လိုက်တယ်။
အဲဒီအခါမှာ မိန်းမက ယောက်ျားကို "နင့်ကို ငါမေးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ အဲဒီကြောင်ကို
မေးနေတာ" လို့ ပြန်အော်လိုက်တယ်။
လင်မယားနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ပြီးနောက် ရှေ့နေဆီသွားပြီး ကွာရှင်းဖို့ ပြင်ကြတယ်။
ပိုင်ဆိုင်သမျှ ပစ္စည်းဥစ္စာကို တစ်ယောက်တစ်ဝက်ဆီ ခွဲဝေကြတော့ မိန်းမဖြစ်သူက
မကျေမနပ်နဲ့ "ကျွန်မစုထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေ တစ်သောင်းကိုလည်း တစ်ဝက်ခွဲရမှာလား"
လို့ မေးတယ်။ ရှေ့နေ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်။ မိန်းမကဆက်ပြီး "ဒါဆို
ဒီကလေးသုံးယောက်ကို ဘယ်လိုခွဲမလဲ"လို့ မေးလိုက်တယ်။ ရှေ့နေခေါင်းကုတ်ပြီး
စဉ်းစားတယ်။ အကြာကြီးစဉ်းစားလဲ သင့်တော်တဲ့အဖြေ မရခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ရှေ့နေက
"ခင်ဗျားတို့ အိမ်ပြန်ပါ။ ကလေး၎ယောက်ရမှ ပြန်လာခဲ့ပါ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ
ကွာရှင်းဖို ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:10 am
အဲဒီရုက္ခစိုးနေတဲ့ညောင်ပင်ကို နေ့ တိုင်းလာပြီးပူဇော်ဆုတောင်းေ
တစ်ရက်နှစ်ရက်မဟုတ် လနဲ့ ချီပြီး နေ့ တိုင်းလာဆုတောင်းနေတော့ ရုက္ခစိုးက
နင်ငါ့ကို နေ့ တိုင်းလာ ပူဇော်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ လို့မေးတယ်။
ဒီတော့ ကောင်မလေးက ဒီလိုပါ . . .ကျွန်မအဖေမှာ အရမ်းချစ်တဲ့
ဒါပေမယ့် အဖေရော သူ့သူငယ်ချင်းပါ သမီးတွေပဲမွေးခဲ့တော့ သူတို့ ကတိ
ကျွန်မလည်းအဖေ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်
ကျွန်မကိုယောကျာင်္းလေးဖြစ်အောင် အရှင်ရုက္ခစိုးကူညီပေးပါ လို့ 
ဒီတော့ ရုက္ခစိုးကြီးက ဟဲ့ နင်ယောကျာင်္လေးဖြစ်အောင် ငါကူညီဖို့ မတတ်နိုင်ဘူး။
တခြားဆုတောင်းချေ လို့ပြောရှာတယ်။
ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးကလည်း ဒီဆုကိုပဲထပ်တလဲလဲတောင်းနေတော့ ရုက္ခစိုးကြီးကအားနာလာပြီး
အင်း . . နင်ဒီလောက်ဆန္ဒပြင်းပြနေရင်လည်း နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။
ကျွန်မအဖေရဲ့ ဆန္ဒသာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရင် ကတိတည်ပါ့မယ်
ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်တိတိပြည့်တဲ့နေ့ ကျရင်နင်လာပြန်လဲရမယ် ဆိုပြီး ကတိတောင်းတယ်။
ကျေးဇူးကြီးပါတယ်အရှင်ရုက္ခစိုးကြီးရယ်။. . .
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ရုက္ခစိုးကြီးခမျာ နေရင်းထိုင်ရင်း ရုက္ခစိုးမကြီးဖြစ်သွားရှာတယ်။
ကောင်မလေးကတော့ ရုက္ခစိုးကြီးရဲ့ တန်ခိုးနဲ့ ကောင်လေးဖြစ်သွားတာကြောင့်
သူ့ အဖေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလက်ထပ်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရုက္ခစိုးမကြီးကလည်းသူ့ ဗိမာန်မှာ အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့ မှာတော့ ရုက္ခစိုးမကြီးရဲ့ ဗိမာန်နားကညောင်ပင်တစ်ပင်ကို
တခြားကရုက္ခစိုးတစ်ပါး Transfer နဲ့ပြောင်း လာပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ရုက္ခစိုးအသစ်ကသူ့ ညောင်ပင်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာရင်း
တောအုပ်လေးထဲမှာနှစ်ပါးထဲဆိုတော့ ဟိုရုက္ခစိုးက ရင်တွေဘာတွေခုန်ပြီး
ရုက္ခစိုးမကြီးရဲ့ ညောင်ပင်ဆီ ကို အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးသွားလည်၊
အချိန်ရတိုင်းလည်း ရုက္ခစိုးမလေးတွေကြိုက်တတ်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ချုပ် ရတာအမော။
ရုက္ခစိုးမကြီးကလည်း သူ့ အကြောင်းသူသိတော့ ရှောင်ရှာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နေ့ တိုင်းနေ့ တိုင်း နားပူနားဆာလုပ်နေတာကြာတော့
ရုက္ခစိုးကြီးကလည်း ပြန်လဲမယ်ဆိုပြီးကိုယ်ထင်ပြတဲ့အခါ ကောင်မလေးအရမ်းအံ့သြသွားပါတယ်။
ဒီတော့ ကောင်မလေးက အရှင်ရုက္ခစိုးကြီး ကျွန်မကတိအတိုင်း
ဒီပုံစံကြီးနဲ့ တော့ပြန်မလဲနိုင်ပါဘူး လို့ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ 
အားနာတတ်တဲ့ ရုက္ခစိုး(မ)ကြီးမှာတော့ ဗိုက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ 
ကလေးအိမ်ပေါ်က လိမ့်ကျလို့ ဆေးရုံပို့ရတယ်၊ ဆရာဝန်တွေ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာကို မိဘတွေက အပြင်ကစောင့်နေရတယ်။ တနာရီလောက်ကြာတော့ ဆရာမလေးတယောက်ထွက်လာတော့ –
''ဆရာမ – သတင်းကောင်းပဲပြောပါ ဆရာမရယ်၊ ကျွန်တော့် ဇနီးက စိတ်လှုပ်ရှားတတ်လို့ပါ။ ကလေး ဘာမှမဖြစ်ဘူး မဟုတ်လား''
''ဟုတ်ကဲ့ – ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ရော၊ ဘယ်ဘက်လက်ရော ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင့်''
ဒင်းနစ်။ ။”အရက်က မင်းကို လှပစေတယ်။ ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေတယ်ကွာ။ မင်းသိပ်လှတာပဲ”
မာဂရက်။ ။”ဟင်း သူကလည်း ကျွန်မအရက်မှသောက်မထားတာ”
ဒင်းနစ်။ ။”ဟင့်အင်း၊ ငါသောက်ပြီး မင်းကိုကြည့်ရင်း ပြောတာ”
ဆိုင်ကယ်ကို မိုင်ကုန်တင်ပြီး မောင်းလာသော ဆိုင်ကယ်သမား ကို ယာဉ်ထိန်းရဲက လှမ်းတား၏
”ခင်ဗျား မောင်းတာ သတ်မှတ်နှုန်းထက် ကျော်နေတယ်” ယာဉ်ထိန်းကပြောသည်။
”ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရက်သောက်တာများသွားလို့ တော်တော်မူးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုက်မှုခိုက်မှု တစ်ခုခုမဖြစ်ခင် အိမ်ကို မြန်မြန်ပြန်ရောက်ချင်လို့ မိုင်ကုန်တင်မောင်းလာတာပါ”
အမူးသမားတစ်ယောက်သည် မနက်ခင်း နှစ်နာရီအချိန်မှာ ယိုင်ထိုးယိုင်ထိုးနှင့် လမ်းမပေါ်မှာ လျှောက်နေသည်။ ထိုစဉ် ကင်းလှည့်နေသော ရဲကားတစ်စီးက သူ့အနားမှာ ထိုးရပ်သည်။
”ဟေ့…ခင်ဗျား ဘယ်သွားမလို့လဲ” ဟု ရဲသားက မေးသည်။
”သြ…ရဲအရာရှိကြီးပါလား။ ကျွန်တော် လက်ချာတစ်ခု သွားတက်မလို့ပါ”
”ဒီအချိန်ကြီးမှာ ဘယ်ဆရာက လက်ချာပို့နေလို့လဲ”
”ကျုပ်မိန်းမက ပြောတယ်ဗျာ။ ကျုပ်အရက်မဖြတ်ရင် ဆက်ပေါင်းတော့ဘူးတဲ့”
”ကျုပ်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျုပ်သူ့ကို လွမ်းနေရတော့မှာပါ”
အရက်မူးသမားတစ်ယောက်သည် လမ်းမှာတွေ့သည့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အရက်ဖြတ်သူများအသင်းဘယ်နားမှာလဲဟု မေးသည်။
”ရှင်က အသင်းဝင်ချင်လို့လား” ဟု အမျိုးသမီးက မေးသည်။
”ဟင့်အင်း…နှုတ်ထွက်ချင်လို့” ဟု ပြန်ဖြေလေသတည်း။
hotel ကြီးတစ်ခုရဲ့ ....ရေကူးကန်ဘေးမှာ....အင်္ဂလိပ် ၊ ပြင်သစ် နဲ့အမေရိကန်တစ်ယောက်.... နေပူစာလှုံပါတယ်..
အဲဒီအချိန်မှာကောင်းကင်က ..အသံတစ်သံက..သင်တို့ သည်...ယနေ့ အတွက်ကံကောင်းသူများဖြစ်သည့်အတွက်....ေ၇ကန်ကြီးကို..
သင်တို့ လိုရာ...အရည်ပြောင်းလို့ ရကြောင်း...ပြောသံကြားလိုက်ရပါတယ်..
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:11 am
ခွဲစိတ်ခန်းထဲကိုခေါ်လာတဲ့ လူနာက တံခါးဝအရောက်မှာ တွန်းလှည်းပေါ်ကဆင်းပြီး ထွက်ပြေးတယ်။ ဒါနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက အတင်းလိုက်ဆွဲပြီး ...
''ခင်ဗျားတို့မကြားဘူးလား၊ ခွဲစိတ်ခန်းထဲက ဆရာဝန်တွေ ပြောတာကို''
''လူနာရောက်မလာခင် တခါလောက် လေ့ကျင့်လိုက်ကြဦးစို့'' တဲ့။
ရတနာပုံ မန္တလေးနေပြည်တော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးသည်
သမိုင်းများမှတ်တမ်းအရ အလွန် ကာမဂုဏ် ခံစားမှုအားကြီးသည်ဟု
လူတိုင်းကြားဖူးကြမည်ထင်သည် ။ ထို့ကြောင့် နန်းဆောင် အသီးသီးမှ ကိုယ်လုပ်
အသီးသီးတို့သည် မင်းတုန်မင်း စံနေသော နန်းဆောင်ကို ဖြတ်လျောက်ကြသောအခါ
မန္တလေးသူများ ဘာကြောင့် ကျနော်လို့ပြောဆိုကြတာလဲ?
မင်းတုန်းမင်က " ဟေ့ ဘယ်သူလဲ " ဟုမေးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့မေးသောအခါ ကိုယ်လုပ်
မောင်းမအချို့တို့သည် "ကျွန်မ ပါ" ဟု ပြန်ဖြေကြလေသည်။ ထိုအခါ
မင်းတုန်းမင်းကြီးက "လာခဲ့စမ်းသည်ကို" ဟုခေါ်၍ ဆက်ဆံမှုပြုလေတော့သည်။
ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကိုယ်လုပ်မောင်းမတို့ကလည်း အထာနှပ်လာသဖြင့်
မင်းကြီးအဆောင်ကို ဖြတ်လျောက်မိသောအခါ မင်းတုန်းမေးသောအမေးကို "ကျွန်တော်ပါ"ဟု
သာပြန်ဖြေကြလေတော့သည်။ ၎င်းနန်းတွင်းမှ သည်
မန်းပျိုဖြူများကလည်း "ကျွန်တော်" ဟုသာ
ပြောဆိုသုံးနှုံးလာကြလေတော့သည်။ ကျွန်တော် ဟု မန်းပျိုဖြူတို့သုံးနှုံ
ပြောဆိုထားခြင်းသည် မင်းတုန်းရန်ကို ကြောက်လန့်ကြ၍ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
အခုခေတ်တွင် မင်းတုန်းမရှိသော်လည်း မန်းပျိုဖြူတို့ ကြောက်စိတ်မပြယ်သေး၍ထင့်
"ကျွန်တော်" ဟူသောအသုံးကို မြိန်မြိန်ဆိုင်ဆိုင် သုံးနှုံးနေကြပါသေးသည်။
ဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်။ သူပြောတာလဲဟုတ်သလိုလိုပဲ ထင်လို့ ပြုံးစရာလေး ဖြစ်နေလို့
အမလေး ကိုမြ ရှင်သေပလား
ရေခဲတိုက် မှာ အလုပ်လုပ်သူ လုပ်သား တယောက် က တနေ. မှာ ဦးမြ ဆိုတဲ. အလောင်းတလောင်း ရောက် လာလို.မသဂြိုလ်ခင်လေး စစ်ဆေးကြည်.ရာ။ သူ. အား အင်မတန် အံ.အား သင်.သွားစေခဲ.ပါတယ်။ ဘာလို.လဲ ဆိုတော. ဦးမြ ဆိုတဲ. လူသေရဲ. ဖိုအင်္ဂါ ဟာ အင်မတန်ကို ကြီးမား နေလို.လေ။
ဒါနဲ. ရေခဲတိုက် လုပ်သားကလဲ ဒီလောက် ထူးဆန်း ကြီးမား လှတဲ. ဖိုအင်္ဂါကို ဖျတ်တောက်ပြီး ဆေးစိမ် ထားလိုက်ရင် နောင်လာနောက်သား တွေ လေ.လာသိရှိနိုင်တယ် ဆိုပြီး အကြံရခဲ.ပါတယ်။ ဒါနဲ. အကြံအတိုင်းပဲ ဦးမြရဲ. ဖိုအင်္ဂါကို ဖျတ်တောက်ပြီး သူ.အိတ်ထဲ ခိုးဝှက် ထည်.ကာ အိမ်သို.ပြန်လာခဲ.ပါတယ်။
အိမ်ရောက်တော. သူပထမဆုံး ထုတ်ပြ သူကတော. သူရဲ. ဇနီးကိုပါ။
ယောင်္ကျား - မင်းကို ငါ မင်းတသက် မမြင်ဖူးတဲ. ပစ္စည်းတခု ပြမယ်။
ဆိုပြီး အိတ်ထဲ မှ ဦးမြရဲ. ပစ္စည်းကို ထုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော...
မိန်းမ - အမလေး ကိုမြ ရှင်သေပလား။
ကိုချမ်းသာ မူးပြီးပြန်သွားတော့ ည ၂ နာရီရှိပြီ။
''ဖွင့်ဘူး။ အစောကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖွင့်ဝင်လာပြီးတော့''
''ဟေ - ဘယ်တုန်းကလဲ''
''အစောကလေ၊ အမှောင်ထဲ တိတ်တိတ်လေးဝင်လာပေမယ့် ကျုပ်သိတယ်။ အရက်နံ့ကထောင်းထနေတာ''
''လုပ်မနေနဲပ အရက်မဝလို့ ကျုပ်အိပ်ပြီထင်တော့မှ ခြေသံမကြားအောင် ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့''
''ဖြတ်မယ်၊ ဖြတ်မယ်၊ နက်ဖြန်ကစပြီး အရက်ဖြတ်မယ်''
သေပျော်ပြီကွ ရောဂါဖြစ်နေသဖြင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ထားသော အဘိုးကြီး တစ်ယောက်သည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေစဉ် သူတို့အနားသို့ ချောမောလှပသော မိန်းကလေး နှစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီး ....
မိန်းကလေး ။ ။ ဒါ သမီးတို့ ကုမ္ပဏီကစီးကရက်ပါရှင်။ ကြော်ငြာနေတာပါ။ တစ်လိပ်လောက် အခမဲ့မြည်းကြည့်ပါရှင်။အားလည်းပေးပါဦး အကိုကြီး။
အဘိုးကြီး ။ ။ အေး.. အေး.... အားပေးရတာပေါ့ သမီးရယ်
(မိန်းကလေးတစ်ဦးကတစ်လိပ်ကို လက်ဆောင်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်မီးညှိပေးလိုက်သဖြင့် အဘိုးကြီးမှသဘောကျသွားပြီး စီးကရက်သုံးဘူး ၀ယ်ယူ အားပေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်.....)
မိန်းကလေး။ ။ ကျေးဇူးပဲနော် အကိုကြီး .... ဟု နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်သွားလေ၏။
(ထို အဘိုးကြီး အိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါ)
အဘွားကြီး။။ အလိုတော်.... တော် ဆေးလိပ်တွေ ပြန်သောက် နေတယ် မဟုတ်လား၊ ၀ယ်လာတာကလည်းသုံးဘူးကြီးတောင်၊ တော့်ကို ဆရာဝန်က ဘာပြောထားသလဲ ..... ဟု ပျာပျာသလဲပြောလိုက်ချိန်တွင် အဘိုးကြီးက ပြန်ဖြေလိုက်သည်မှာကား ....
အဘိုးကြီး ။ ။ သေချင်သေပါစေတော့ကွာ၊ သေပျော်တယ်။ သေပျော်တယ် .....ဟူ၏။
(၁) ရူပဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရောက်နေပါက အကြည့်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါ။ မှားတတ်၍ဖြစ်၏။
(၂) ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရောက်နေပါက အရသာမြည်းစမ်းမှုမပြုရ။ ဒုက္ခရောက်တတ်၍ဖြစ်၏။
(၃) ဇီဝဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းတွင်း ရောက်နေပါက အနံ့ခံမှုမပြုရ။ အော်ခလီဆန်တတ်၍ဖြစ်၏။
(၄) ဆေးဝါးသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရောက်နေပါက ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ကိုင်မှုမပြုရ။ အရောအစပ်မှားတတ်၍ဖြစ်၏။
(၅) ဒဿနိကဗေဒစာသင်ခန်းအတွင်းရောက်နေပါက နားထောင်ခြင်းမပြုရ။ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားနိုင်၍ဖြစ်၏။
(၆) ဥပဒေဘာသာရပ်စာသင်ခန်းအတွင်းရောက်သွားပါက အာရုံကိုအခြားတစ်နေရာသို့ပို့ထားပါ။ ဥပဒေကိုလက်တစ်လုံးခြား လုပ်တတ် သွားနိုင်၍ဖြစ်၏။
(၇) အမှုစီရင်ကြားနာမှုပြုနေသည့် တရားရုံးအတွင်းရောက်သွားပါက တရားသူကြီးကို မျက်ခြေမပြတ်အကဲခတ်ပါ။ မည်သို့အိပ်ငိုက်မှု ပြုသင့်သည်ကို သိသွားနိုင်၍ ဖြစ်၏။
''ကျွန်တော် အရက်ဖြတ်တော့မယ် ဆရာ''
''ဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားလို့လဲ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို အရက်ဖြတ်ဖို့ပြောနေတာ ကြာလှပြီ။ ခုမှ ဖြတ်ချင်ရတယ်လို့''
''သူကလည်း တားမရလို့ အိမ်မှာသောက်ခွင့်ပြုထားပြီ မဟုတ်လား''
''ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ မူးလာရင် တယောက်ကို ၂ ယောက်မြင်နေရတော့ ပိုပြီး စိတ်မချမ်းသာဘူးဆရာ။ ဆိုင်မှာ သွားသောက်လို့မြင်ရတဲ့ မျက်နှာနဲ့ မတူဘူးလေ''
''ဆရာ – ကျွန်မယောက်ျားရူးနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ နည်းနည်းစစ်ဆေးပေးပါဦး''
''သူက ဘာတွေ ထူးထူးခြားခြားလုပ်နေလို့လဲ''
''အရက်သွားသောက်တိုင်း အိမ်တံခါးမကြီးက တံခါးရွက်ကို ဖြုတ်ဖြုတ်ယူသွားတယ် ဆရာ''
ဒီတော့ ဆရာဝန်က ခပ်ငေါင်ငေါင်နဲ့ ရပ်နေတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူဘက်ကိုလှည့်ပြီး -
''ကဲ – ခင်ဗျား မိန်းမပြောတာ ဟုတ်သလား''
''ဘာလို့ အဲသလို လုပ်ရတာလဲ''
''သူက မူးပြီးပြန်လာရင် တံခါးဖွင့်မပေးဘူး ပြောလို့ပါ''
မုဆိုးနှစ်ယောက်သည် သစ်တောထဲတွင် အမဲလိုက်ထွက်နေစဉ် တစ်ယောက်သောသူသည်ရုတ်တရက် လဲကျသွားလေသည်။ အသက်လည်းရှုပုံမရ၊ မျက်လုံးများမှာလည်းရီဝေေ၀ဖြစ်နေလေသည်။ ကျန်တစ်ယောက်က ဖုန်းကိုထုတ်ကာ အရေးပေါ်ဌာနသို့ဆက်လေသည်။
ယင်းအမျိုးသားမှ - ဒရိုင်ဘာကိုအခုချက်ခြင်းသွားပြီ
း ရန်တွေ့သင့်တယ်။ ကျုပ်ခင်ဗျား မျောက်ကလေးကိုထိန်းထားမယ်။
နာရီအတန်ကြာအိပ်ပြီးသော်ရှားလော့ဟုမ်း(စ)သည် တရေးနိုးလာပြီး၊ သစ္စာရှိသူငယ်ချင်းဝတ်ဆင်အားနိုးပြီး- ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီး ဘာတွေမြင်လဲ ပြောစမ်းပါဦး။
-နက္ခတ္တဗေဒအရဆို အဲဒီကြယ်တွေဆိုတာ ဂလက်ဆီတွေ၊ဂြိုလ်တွေ အသိန်းအသန်းပေါ့။နက္ခဗေဒင်အရဆိုရင် စေတန်က လီယိုဘက်ရောက်နေတယ်ဗျာ။ ဇာတာခွင်အရဆို အချိန်သုံးနာရီ ဆယ့်ငါးပေါ့။ ရာသီဥတုဆိုရင်တော့ မနက်ဖြန် နေသာပြီး သာယာမယ်ဗျာ။ဘာသာရေးအရဆိုရင် ဘုရားသခင်က တန်ခိုးအလွန်ကြီးမားပြီး၊ ကျုပ်တို့ကစကြာဠာထဲမှာ အလွန်သေးငယ်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့။ နေပါဦး ခင်ဗျားကရောဘာကောက်ချက်ချမလဲဗျာ။
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:12 am
ကောင်းကင်ကြား ကြယ် က က
ယောက်ျားမှမိန်းမနှင့် အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်းမ ၁၀ ယောက်ထံသို့ ဖုန်းဆက်ကာမေးမြန်းသောအခါ - ၁၀ ယောက်လုံးသည် ညတုန်းက သူမတို့ဆီတွင် အိပ်မသွားပါဟုဖြေကြလေသည်။
မိန်းမမှယောက်ျားနှင့် အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်း ၁၀ ယောက်ထံသို့ ဖုန်းဆက်ကာမေးမြန်းသောအခါ - ၅ ယောက်မှ သူတို့ထံတွင်အိပ်၍ ပြန်သွားပြီးဟုဖြေပြီး၊ကျန် ၅ ယောက်က ယခုဖုန်းဆက်သည် အချိန်ထိ သူ့တို့ဆီတွင်ရှိသည်ဟု ဖြေကြလေသည်။
သွားတယ်၊မင်းမရှိဘဲနဲ့ဘ၀မှာတစ်ယောက်တည်းမနေပါရစေနဲ့။ မနက်ဖြန် ညနေစာ အတူစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အကယ်၍ မနက်ဖြန်ခါမှာ မင်းမအားဘူးဆိုရင် မင်းရဲ့ညာဖက်မှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးလှလှဆီကို ဒီစာရွက်လေးကမ်းပေးပါ။"
အရက်သမား ၂ ယောက် အရက်ဆိုင်မှာ အရက်သောက်နေရင်း -
ပ။ ။ မင်းကို ဆရာဝန်က ဘာပြောသလဲ။
ဒု။ ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေ ပြောတာပါကွာ။
ပ။ ။ ဘယ်လိုပြောတာလဲ။
ဒု။ ။ အရက်ကို မမူးအောင်သောက်တဲ့။ ကဲ – စဉ်းစားကြည့်။ အရက်သောက်မှတော့ မူးမှာပေါ့။ မမူးအောင်သောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ရေနွေးကြမ်းသောက်နေရုံပဲရှိတယ်။
ပ။ ။ သည်းခံလိုက်ပါကွာ။ အရက်ကို မမူးအောင် သောက်လို့မရဘူး။ မမူးအောင်သောက်လို့ရရင် အရက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူတို့မသိလို့ပါကွာ။
အနောက်တိုင်း နိုင်ငံတစ်ခုတွင် စုံတွဲတစ်တွဲသည် လက်မထက်ပဲ အတူတကွ နေထိုင်လာကြရာ အသက်မှာ (၄၀) ကျော်လာခဲ့လေသည်။
တစ်နေ့မှာ အမျိုးသမီးမှ သူ့ ချစ်သူကို ကျွန်မတို့ လက်မထပ်ဘဲ နေလာကြတာ အသက်တောင် (၄၀) ကျော်လာပြီ။ ကျွန်မတို့ ဘယ်တော့လောက် လက်ထပ်ကြမှာလဲဟု မေးလိုက်ရာ သူမ၏ ချစ်သူက ငါတို့ ဒီလောက် အသက်တွေ ကြီးနေတာ ငါတို့ကို ဘယ်သူက လက်ထပ်အုံးမှာလဲကွာဟု ပြန်မေးလိုက်လေသည်။
" ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ...မင်းကိုယ်မင်းပစ်စမ်း..".....ဟု..အမိန့် ပေးလေသည်...
(မြက်လှည့်ပြတာတော့ ငါတောင်တတ်တယ်) ။ ဟိုရောက်တော် ကျားပေါက်ဆိုတာ.. လား
(ကင်ပွန်းတပ်တာ..သူ့အလှည့်မှ ကင်ပွန်းချဉ်ဟင်းချက်တယ်လို့ပဲ) ။
တောင်းပေါ်က ခြင်မကို မေ့မတွားပါနဲ့ (တောင်ပေါ်က
ချင်းမကိုမမေ့ဘူးဟေ့..တသက်လုံး) ။ ကိုယ်လုံး ပျံလာပါနော်
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:13 am
ဖတ်မိသမျူ ဟာသလေးတွေ ရေးလိုက်ပါတယ်.......
မဖတ်ရ ကျနော်ပြောမယ်။ ဒီစာကို မဖတ်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီစာကို ဖတ်လို့ခင်ဗျားအတွက် ဘာမှ အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ် အကျိုးမရှိလို့မဖတ်ရဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာပေါ့။ ခင်ဗျား ဆက်ဖတ်တာဟာ ခင်ဗျားရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပါ။ တားမြစ်လို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုံးဝ မဖတ်ဖို့ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။ ပြောနေရင်းနဲ့တောင် ခင်ဗျား ဆက်ဖက်နေသေးတယ်နော်။ကျနော်က ခင်ဗျား အတွက် ပြောနေတာပါ။ ခင်ဗျား ဒါကို နားမထောင်ဘဲ ဆက်ဖတ်နေတာခင်ဗျားအတွက် အကျိုး လုံးဝ မရှိလို့ပါ။ အခုတောင် ခင်ဗျား ဖတ်လာတာစာကြောင်းရေ တော်တော်များလာပြီ။ ကျနော်က ခင်ဗျား အကျိုးကို ရှေးရှူပြီးမဖတ်စေချင်တာပါ။
ဆက်မဖတ်နဲ့တော့နော်။ လုံးဝကို အကျိုး မရှိဘူး။ အကျိုး လုံးဝလုံးဝမရှိပါ။ အကျိုးမရှိတာကို မြန်မာလို ဒီထက်ရှင်းအောင် ကျနော်ပြောမပြတတ်တော့ဘူး။ အလားတူဘဲ .. မဖတ်ပါနဲ့ကိုလည်း ဒီထက်ရှင်းအောင်မြန်မာလို ရှင်းမပြတတ်ဘူး။ ဒီတော့ ရှင်းရှင်းပြောမယ်။ ဆက်မဖတ်နဲ့။ပြောနေရင်းနဲ့တောင် ခင်ဗျားဖတ်လာတာ များသထက် များလာပြီ။ ကျနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ၊ မဖတ်ပါနဲ့။ ဟုတ်ပြီလား၊ မဖတ်နဲ့တော့။ ဒီစာထဲမှာဘာမှပါမှာ မဟုတ်လို့ မဖတ်နဲ့လို့ ပြောနေရတာပေါ့ဗျာ။ လူ့စိတ်ကလည်း အခက်သား၊မဖတ်ပါနဲ့ဆို တိုးလို့ဖတ်ချင်တယ်။ ခင်ဗျား တိုးလို့ဖတ်လေ၊ ကျနော်ကမဖတ်ဖို့ တားမြစ်ရလေဘဲဗျာ။ မဖတ်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဖတ်စေချင်လို့ပါ။ အခုပြောရင်းနဲ့ စာတောင်တော်တော် ရှည်သွားပြီ။ ဒါဘဲ။ကျနော်ပြောမယ်။
burmanone on Tue Mar 17, 2009 4:30 am